पिकनिक - यो गर्मी समयमा एक मनपर्ने मनोरञ्जन। तर, यो गिरावट छैन उसलाई कंबल को एक जोडी र एक स्वादिष्ट भोजन लिएर, खुला हावा जाने गर्न सक्ने होइन। मौसम अनुमति दिन्छ भने, र स्पेयर समय छ, किन शरद ऋतु सूर्य र poshurshat अनित्य अप भिजेको छैन? धेरै के व्यञ्जन तपाईं जमघट स्वाद नभएको खाना द्वारा SPOILED छैन थियो कि धेरै कारक विचार गर्न आवश्यक छ किनभने, एक पिकनिक लागि तयार आश्चर्य। उत्पादनहरु प्रकृतिका खाना पकाउने लागि सबैभन्दा उपयुक्त हो जो आदेश निर्धारण गर्न, र धेरै समय खर्च नगर्नुहोस्, तपाईं केही मुख्य सिफारिसहरू पालन गर्न आवश्यक छ। यी सुझावहरू पढेपछि तपाईं मात्र पुरानो मित्र सँग न्यानो बैठक गर्न सक्छन्, तर पनि रोमान्टिक डिनर बाहिर तयार।
एक पिकनिक लागि व्यञ्जन प्रकृति मा: मुख्य सिफारिसहरू
पहिलो उत्पादनहरूमा को दायरामा निर्णय गर्न आवश्यक छ। यो किनभने, सबै पछि, तपाईं मात्र त्यहाँ खान जाँदै छैन, एक सुपरमार्केट किन्न आवश्यक छैन। यो सूर्य बिगार्छ छैन भनेर ती खाद्य पदार्थ चयन गर्न राम्रो छ। तपाईं मासु वा माछा खटाई मा हालन गर्न अग्रिम साथै, ताजा फल र तरकारी प्राप्त गर्न सक्छन्। साथै, थुप्रै मानिसहरूले पिकनिक पनीर लिन रुचाउँछु। यो उत्पादन को लगभग कुनै पनि प्रकारको फिट। सलाद, मेयोनेज संग लुगा तयार लागि जाँदा, त्यसपछि राम्रो तिनीहरूलाई त्याग्नुभएन। प्रकृति मा एक पिकनिक लागि यस्तो व्यञ्जन उपयुक्त छैन। एउटै स्यान्डविच बारेमा भने गर्नुपर्छ। पक्कै पनि, केही मानिसहरू आफ्नो मनपर्ने नाश्ता बिना प्रकृतिका जमघट कल्पना गर्न सक्छन्, तर वास्तवमा यो पिकनिक मा यो आफैलाई पकाउन राम्रो छ, वा बाटोमा, यो खराब जाने सक्नुहुन्छ। र त तपाईं ताजा तयार canapés बाहिर बारी। तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अधिकतम - उत्पादन र भुट्नु रोटी टोष्ट को तयारी को लागि सबै आवश्यक अग्रिम सङ्कलन छ। अन्य कुराहरु, यो भाँडा हेरचाह गर्न आवश्यक छ। मेरो हजुरआमाको चिया सेट र बरतन saucers लिन छैन। यो त तपाईं संग बोक्न र घर बचा मा सुकेको खाना धुन छ गर्दैन डिस्पोजेबल कप र प्लेट, के गर्न सम्भव छ। भूल छैन र तालिका कवर, तपाईं पनि बस्न केहि हुन आवश्यक छ। र प्रत्येक व्यक्ति वातावरण बारे हेरचाह गर्न छ देखि, फोहोर झोला लिन निश्चित हुन। तपाईं बसिरहेका थिए ठाउँमा सफाई गर्दा उहाँले सजिला मा आउनेछ। यदि प्रकृति मा एक पिकनिक लागि केही खानेकुरा, तपाईं खाएको छैन, त्यसपछि, प्लास्टिक कन्टेनर लिएर, तपाईँ तिनीहरूलाई घर ल्याउन सक्छ। यो मौसम लागि ड्रेस महत्त्वपूर्ण पनि छ। तपाईं वर्ष को यो समय धेरै भ्रामक छ, किनभने गिरावट मा ताजा हावा जाँदैछन् भने यो विशेष गरी साँचो हो।
एक पिकनिक लागि व्यञ्जन: व्यञ्जनहरु
लसुन मक्खन संग 1 सैंडविचेस। तपाईं यो पकवान लागि आवश्यक सबै, - तेल पूर्व-पकाएको। एक ब्लेंडर राख्नु क्रीम उत्पादन को 200 ग्राम, एक सानो greenery र लसुन को चार टाउको काट्नु। तपाईं चलाउनु धेरै आवश्यक सबै। आवश्यक पछि प्लास्टिक कन्टेनर मा तेल शांत। तुरुन्तै भोजन अघि तिनीहरूलाई राई रोटी फैलाउन, शीर्ष र garnish ताजा तरकारी संग मा एक सानो माछा थप्नुहोस्। बाहिर एक पिकनिक लागि यो योजना भोजन धेरै स्वादिष्ट र एकदम बस र चाँडै तयार पारे।
2. एक सलाद सिद्ध ग्रीक मा। उहाँलाई लागि तीन पाकेको टमाटर, ककडी, मीठो मरिच र दुई ठूलो प्याज आवश्यक छ। सबै ठूला स्लाइस र प्याज छल्ले कटौती मा कटौती। इन्धन भर्ने सम्भव छ रूपमा तेल र 150 ग्राम प्रयोग गर्न "feta" पनीर, पनि diced छ जो।
3. कस्तो पिकनिक सुगन्धित बारबेक्यू बिना पूर्ण छ? तपाईं मसालेदार चाहनुहुन्छ भने, र धेरै समय पकाउने खर्च गर्न चाहँदैनन्, यो ग्रील्ड कुखुराको पखेटा प्रयास गर्नुहोस्। यसो गर्न ठीक उत्पादन र विशेष मिश्रण खटाई मा हालन को एक किलोग्राम कुल्ला। यसको तयारी लागि, वनस्पति तेल को 180 एमएल, धनिया र जीरा को एक चमचा, कागति बोक्रा र बेसार एक spoonful,2लसुन लौंग र दुई खुर्सानी मिश्रण दुई चिया चम्मच करी। आफ्नो रुचि को नुन marinade गर्न सक्छन्। भिगो चिकन विस्तार गर्ने,5घण्टा एक सुन्दर ठाउँमा यो ठाँउ हो। कि पछि तपाईं सुरक्षित ग्रिल मा राख्नु र कोइला मा खाना पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ।
4 कुनै भोजन मिठाई बिना जानु पर्छ। एक पिकनिक लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प ताजा फल सेवा गर्छन्। खैर, तिमी सिर्फ तिनीहरूले narezhete छैन र एक सलाद बनाउन भने। तपाईं मात्र स्याउ, नासपाती, सुन्तला र केरा सफा गर्न आवश्यक छ। इष्टतम रकम प्रत्येक फल 150 ग्राम को हुनेछ। सिजन मह दुई चमचा संग सुन्तला रस संग समाप्त पकवान। सजावट, तपाईँ कुचल अखरोट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रकृति मा एक पिकनिक लागि यी व्यञ्जन स्वादिष्ट र सन्तोषजनक धेरै सरल छ, तर एकै समयमा। आफ्नो छुट्टी आनन्द लिनुहोस्!
जाम र बरकरार Samburu नुस्खा दर्शनमा सुधार
खट्टा क्रीम सस
खरायो स्ट्यु - multivarka मा नुस्खा
उपयोगी मिठाई: मह र केही अन्य विकल्प संग Feijoa नुस्खा
घरमा Adygei पनीर: एक नुस्खा। दूध देखि घरेलु पनिर
Risotto कसरी खाना पकाउनु?
जादू शब्द: व्यापार गर्न षडयंत्र
कैंषफ्ट तेल छाप Wha र आफ्नो प्रतिस्थापन
जन्मजात उपदंश - आमाबाबुको दोष।
Ischemic आक्रमण - यो धूर्त के हो?
एक सिलिकन को फारम वा सरल र स्वादिष्ट मिठाई मा नुस्खा केक